Dia misaotra mialoha sahady ho an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e! Miarahaba antsika rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra. Mikasika ny sosokevitra indray, azonao atao ny manoratra aty amiko mivantana ahafahantsika miresaka misimisy kokoa agape1. Afaka mba mahazo ve ampiasaina aty an-trano sy aty am-piangonana. Noho ny fahateren’ny fotoana, dia izao vao afaka namaky indray ny commentaire-tsika rehetra. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel? Averiko eto indray ilay izy:.
Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Sady mandeha amin’ny SE rehetra. Manahoana i Sissy, Asa na efa nahazo ilay logiciel Baiboliko 3. Mety misy vahaolana ve. Misy ny rehetra rehetra baiboly, fihirana, sns fa ilay izy ampiasaina ordinateur mihitsy no ilàna ity Baiboliko 3.
Maintenant, ;rotestanta pouvez dihirana la bible en 3 langues différentes, en malagasy, en français ou en anglais. Mety misy grtauit ve. Salama,mba atoroy fomba hahazoana an’io Ny baiboliko 3. Windows 10 zao no nanandramako azy farany fa tsy misy olana mihitsy. Dia misaotra mialoha sahady ssy an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e!
Sady mandeha amin’ny SE rehetra. Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Betsaka dihirana olona no manoratra sy miantso, mangataka ny mba hamoahana ny version mobile ny Ny Baiboliko.
FozaRemover – patch pour virus qui supprime votre bureau Ny Baiboliko – autre version. Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Tsara be sy manampy o Baibily Répondre. Manahona Tompokoba maniry izay ba ho afaka ampiasaina amin’ny macbook orotestanta koa ny baiboly malagasy Répondre. Bjr, za zany miasa amin’ny orin’asa iray e! Izaho dia efa niezaka nanao téléchargement tamin’ny téléphone-ko blackberry dia nahazo tokoa saingy tsy mety misokatra ilay smartbaiboly fa izao no baiholy miseho eo hoe: Misaotra mialoha Tompoko amin’izany version mobile izany.
Par gasysoft dans Accueil le 5 Avril à Mba maniry hahazo an’ilay logiciel « Ny baiboliko 3. Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata Répondre.
Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Mangataka ity logiciel ity aho julio Mirary soa dia mazotoa. Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan’ny fitaovana ampiasaiko isan’andro gratjit amin’ny solosaina.
Ny olana anefa dia izao: Mahereza amin’ny asan’ny Tompo. Ho tahian’Andriamanitra isika tihirana indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao. Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly.
Afaka mba mahazo ve ampiasaina aty gratjit sy aty am-piangonana. Faly miarahaba antsika rehetra. Ny fihirana mbola tsy nisy fa vao eo am-panamboarana mihitsy.
Protestwnta ianareo rehetra izay nifarimbola; Mankasitra Hono ho aho, izy io ve compatible am window 10? Ho anareo izay mila fanazavana sns, azonareo atao ny manoratra mivantana aty amiko.
Manahoana i Sissy, Asa na efa nahazo ilay logiciel Baiboliko 3. Averiko eto indray ilay izy:.